Ny Dr Douglas: «Azo atao amin’ny fotoana rehetra ny didim-poitra…” | NewsMada
Ny Dr Douglas: «Azo atao amin’ny fotoana rehetra ny didim-poitra…”
Ao anatin’ny vanim-potoana ririnina ny eto Madagasikara ankehitriny. Fotoana, fanaovana famoran-jaza. Malaza anefa ny didim-poitra tsy mandeha ra, izay azo tanterahina amin’ny fotoana rehetra, araka ny fanazavan’ny dokotera Douglas.
Gazety Taratra (*) : Misy fotoany ve ny fanaovana didim-poitra sa azo atao amin’ny fotoana rehetra ?
Dr Douglas (-) : Raha ny fahazarantsika eto Madagasikara, amin’ny vanim-potoana mangatsiaka, izany hoe, andro ririnina manomboka ny volana mey ka hatramin’ny aogositra ny fanaovana azy, saingy raha ara-pahasalamana, azo atao foana ny didim-poitra, mandavantaona, manomboka janoary ka hatramin’ny desambra.
* : Misy ny fomba vaovao amin’izao fotoana izao, ny didim-poitra tsy mandeha ra. Ahoana ny endrika fisehoany?
– : Araka ny fivoaran’ny teknolojia sy ny eo amin’ny fahasalamana, amin’izao fotoana izao, ilay didim-poitra tsy mandeha rà tokoa ny mahazatra ny olona. Mampiavaka azy ny hafainganany sy ny fahadiovany ary ny antoka entiny ho an’ilay zaza voadidy.
*: Misy fetrany ve ny taona ho an’ireo hatao didim-poitra?
-: Ny fetra ambany no misy satria manomboka eo amin’ny fahafito andro nahaterahan’ny zaza vao azo atao didim-poitra. Ny fetra ambony kosa, tsy misy fa azo atao foana na hatrany amin’ny faha-30 taona aza. Saingy mahazatra ny olona eto amintsika, eo amin’ny faha-2 na faha-3 taona ny hanaovana didim-poitra.
*: Azo atao didim-poitra avokoa ve ny zaza rehetra?
-: Izay ny mampiavaka ny didim-poitra hataon’ny dokotera. Alohan’ny hanaovana ny fandidiana, tsy maintsy mandalo fizaham-pahasalamana ilay zaza hahafahana mamantatra na azo atao didim-poitra na tsia na mbola misy zavatra homanina ho azy na ilàna fanafody.
*: Misy ora ve ary mila toerana voatokana ny fanaovana didim-poitra tsy mandeha ra?
-: Voalohany aloha, tsy misy toerana voatokana fa manana safidy ny ray aman-dreny na any amin’ny toeram-pitsaboana na any an-trano. Toy izany koa ny ora hanaovana didim-poitra. Matetika, any an-trano ny tena be mpifidy. Ny antony, tsy mivezivezy ireo ray aman-dreny ary eo no ho eo dia afaka milalao ilay ankizy.
*: Inona ny fitandremana sy ny tombony amin’ity didim-poitra tsy mandeha rà ity.
-: Ny fitandremana aloha, mba tsy ho voadona ny faritra avy nodidina. Ilaina ihany koa ny fahadiovana sy ny fanarahana ireo toromariky ny mpitsabo. Betsaka ny tombony, raha tsy hilaza afa-tsy ny hoe: voaaro amin’ireo karazan’aretina saropady maro ilay zaza ary voatandro ny fahasalamany.